Umlando Wesitimela - Ukuhamba Komndeni | I-Seymour, IN | Isikhungo Sokuvakasha SaseJackson County
Ikhaya / Izikhangibavakashi / Museums / Umlando Wesitimela
IJackson County Indiana icebile ngomlando wesitimela. Imizila eminingana yesitimela inqamula kule ndawo. Imiphakathi emincane yasemakhaya ikhule ngenani labantu kanye nezimboni futhi yamukela labo abafuna umsebenzi nalabo abathenga umhlaba nokuzinza endaweni.
Ngawo-1840 wokugcina, ujantshi waseJeffersonville nowase-Indianapolis wakhiwa ubheke enyakatho-ningizimu ngeSeymour, ngaleso sikhathi eyayaziwa ngokuthi yiMule's Crossing., Umhlaba wawungowomndeni wakwaShields. Ngo-1852, inkampani kajantshi osempumalanga nentshonalanga yayinesifiso sokwakha naseSeymour. Abakwa-Ohio-Mississippi Railroad Co banikezwe isivumelwano esizuzisa ngokwakha endaweni yakwaShields ngabakwaMeedy Shields. Uze wanikela ngokuzokwakha ukugcwaliswa kwamamayela ama-3 ngamachibi, indawo yedepho, indlu eyindilinga neyokulungisa futhi wanikela ngokuqamba igama ledolobha ngonjiniyela we-O & M, uCharles Seymour. Ngo-1852, iSeymour yaba yindawo yokuhlangana kwezitimela ezimbili ezinkulu. UCaptain Meedy Shields waba yisenenja yezwe futhi waqinisekisa ukwedluliswa komthethosivivinywa wezokuphepha odinga ukuthi zonke izitimela zime kuyo yonke imigwaqo yezitimela. Ngenxa yakhe, ojantshi ababili baphoqeleka ukuthi bame eSeymour, okwakulungele ibhizinisi kanye nedolobha elincane. I-Seymour yafakwa ngo-1864 nenani labantu abangu-1,553.
Ukuxhashazwa kweJames-Younger Game neButch Cassidy neSundance Kid kuyinganekwane, kepha bambalwa abaziyo ukuthi ukuphanga izitimela kuhlonyiwe kwavulwa yiqembu elalaziwa kancane elivela eJackson County. Bakhuliswe endaweni yaseRockford, abafowethu baseReno kwathiwa abasithandi isikole nokukhuliswa kwabo kanzima. Ukugqekeza, ukwebiwa kwamahhashi, ukushiswa komlilo kanye nomlilo wobugebengu kulo lonke elaseMidwest kwakumane kuyisiqalo nje.
Ngo-Okthoba 6, 1866, uJohn noSimeon Reno noFrank Sparks bagibela isitimela i-O & M eSeymour njengoba sasiphuma edolobheni siphoqa isithunywa ukuthi sivule isisefo. Bantshontshe u- $ 12,000 kuya ku- $ 18,000 base bephusha esinye isisefo, kunamahemuhemu okuthi bangaba nama- $ 30,000 ngaphakathi, esitimeleni. Isisefo leso, esihlinzeka ngokusinda kakhulu, sashiywa.
AbakwaRenos bathunjwa yiPinkerton National Detective Agency futhi baboshwa eNew Albany, IN (amamayela angaba ngu-55 eSeymour). UFrank Reno noCharlie Anderson bagqunywe ejele eCanada ngamacala abawenzile base bedluliselwa eNew Albany.
Ngaphansi komhlaba wesitimelaIzikhangibavakashi, Museums